Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 8,215 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
18 Shawwal 1443 H
Dhulgariir waa Dhulka marka oo luxluxmo ama uu gariiro, waa marka caleemaha Dhulka kala durqaayaan. Dhulgariirka khasaarado badan ayuu geestaa, wuxuuna u badan yahay Aasiya iyo Ameerika. Dhulgariirka wuxuu sameeyaa fulkaano iyo Buuro. Soomaaliya dhulgariir culus malahan, laakiin mar marka qaar ayaa waxaa dhulgariir ka dhacaa waqooyiga Soomaaliya oo dhan meelaha buuraaleeyda ah, dhulgariirka soomaaliya badanaa mala dareemo, lakiin waxaa jira kuwo la dareemaayo oo ka dhaca sida gobolka Awdal Bishii Maarso 2010 ayaa magaalada Boorama waxaa lagu arkay dhulgariir oo halkaas kadhacay oo khasaaro badan geesanin lama hayao ilaa iyo hadda cabirkiisa maxaa yeelay soomaaliya ka jirin dawlad dhexe oo haysata qalabka cabirka dhul gariirada. Soomaaliya waxeey leedahay caleemaha dhulka ama af ingriiska lagu dhaho (tectonic plate), kaas oo lagu magacaabo (somali plate).
Dhulgariirkii ugu culusaa wuxuu ka dhacday Badweynta Hindiya 2004 Tsunami Badgariir. waxaana ku dhintay in ka badan 180.000, waxaana ku guryo beelay 1.1 miliyan oo dad ah. Soomaaliya waxaa kasoo gaaray qasaaro farabadan kaasoo dhica walba saameeyey haba ugu darnaadeene haamanka sunta ah ee badda lagu daadshay oo banaanka usoo caariyey. (SII AQRI)
Saableyda feeraha ama Saableeyda uurku jirta.
Taariikhdu Maata Waa 19 May 2022 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 8,215 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin